.:: IT WEB CRAZY BOY ::.: ကွန်ပျူတာက Download Manager မှာ ဆွဲထားတဲ့ဖိုင်တွေ Resume မရပါက ရအောင်လုပ်နည်း(Reshare Post)
ကွန်ပျူတာက Download Manager မှာ ဆွဲထားတဲ့ဖိုင်တွေ Resume မရပါက ရအောင်လုပ်နည်း(Reshare Post)
အသုံးဝင်တဲ့ ပိုစ့်လေးမို့ပြန်share လိုက်ပါတယ်။
IDM ကတော့ Downloader တွေထဲမှာ အသုံးများဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး downloaderပါပဲ။
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ.....
ဒီနေ့ PC က IDM မှာ ဆွဲထားတဲ့ဖိုင်တွေ Resume Download လုပ်လို့မရတော့တဲ့အခါ ရအောင်လုပ်မည့်နည်းလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
တကယ်ရပါတယ်နော် ပြောထားသလိုပဲ လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။
ကဲစရအောင် ပထမဆုံးသားတို့Resume လုပ်ချင်တဲ့ ဖုိုင်ဆီကို Download Manager ကနေတဆင့်သွားလိုက်ပါ ။
ရောက်ပြီဆိုရင် ဖိုင်ကို ထောက် Right Click >>>>>Reflesh download adress ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။
Broswer ကနေ သွားနေပါလိမ့်မယ် ခဏလေးစောင့်ပါ
အဲ့မှာ အရင်ဆွဲထားတဲ့ ဖိုင်ဆီရောက်သွားရင် Download အသစ်ထပ်ဆွဲပါ IDM နဲ့ ပဲပြန်ဆွဲနော်
0k ဆွဲနေပြီဆိုရင် pause ထားပါ Downlaod Manager ဆီပြန်သွား ဆွဲနေတဲ့ အသစ်ပေါ်မှာ Right Click >>>Properties ထဲက
ပြီးရင် အနီနဲ့ ၀ိုင်းပြထားတဲ့ Link တွေ အကုန်လုံးကို Copy လုပ်ပါ ။
ok ပြီးရင် အရင် Resume လုပ်မရတဲ့ဖိုင်ကိုသွား Right Click >>>>> Propertiesခုနက ပြတဲ့နေရာလိုမျိုးမှာပဲ လင့်တွေအားလုံး Paste လုပ်လိုက်ပါ
ပြီးရင် ok ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်အဲ့ဖိုင်ကို Resume လုပ်လိုက်ပါ။
အဆင်ပြေစွာနဲ့ ဆက်ဒေါင်းနေပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒါဆို
ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ ဗျာ အဟောင်းကဆွဲမယ့် လင့်ကိုအသစ်က ဆွဲမယ့် လင့်နဲ့အစားထိုးလိုက်တာပဲ
အဆင်ပြေပါစေ.........................Min Oke Kar (ဘီလူးကျွန်းသားလေး)}
Posted by FlashSongCrazy at 08:09
Labels: Downloader, နည်းပညာ